Arzantina: Tsy Hay Tohaina Ny Lavenon’ilay Volokano Puyehue Any Amin’ny Faritr’i Arzantina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jona 2011 18:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, srpski, English, 繁體中文, 简体中文, Español
Ny 4 Jona 2011 teo no nanomboka nitroatra ny volokano Puyehue ao Chile, namoaka lavenon-tsetroka matevim-be izay nandrakotra toerana midadasika tany amin'ny faritra. Saingy tsy nijanona tamin'iny andro iny ihany ny tantara.
Niantraika tamina toerana midadasika tamin'ireo faritra an-tendrombohitra tany Arzantina ilay fipoahana ary io no ho isan'ny loza voajanahary goavana indrindra nidona tamin'ny firenena tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Bariloche sy Villa La Angostura, tanàna roa isan'ny fitodiana ara-pizahantany rehefa andro ririnina no voa mafy koa tamin'ity fipoahana volokano ity.
Sidina nofoanana tao Buenos Aires, sary avy amin'i Patricio Murphy.copyright Demotix (13/06/11).
Ao amin'ny bilaogy 101lugaresincreibles [es], Matias Callone dia nanoritsoritra ny zava-nitranga:
Ny fipoahan'ny volokano Puyehue ao atsimon'i Chile, efa maherin'ny herinandro roa izao, dia sady nampitondra faisana an'ireo mponina no nanohintohina ihany koa ireo mpizahatany avy amin'ny lafiny roa amin'ny sisintany. Noho ny rivotra, ny lavenon'ilay volokano, izay tafakatra tany anaty atmaosfera tany dia namorona karazana andrirahona mirefy 7,5 kilometatra, ary mitohy mirotsaka tsindraindray any amin'ny faritr'i Los Lagos any Arzantina. Bariloche, Vila Traful ary Villa Angostura no faritra telo isan'ny tena voa mafy.
Na izany aza, tsy mijanona ho an'ireo faritra ireo ihany ny fiantraikan'ilay olana, satria nentin'ny rivotra niely lavitra ny lavenona teny amin'ny habakabaka, nitarika hatramin'ny fanafoanana sidina mpandeha isan'andro tsy tao amin'ny fitodiam-piaramanidin'i Arzantina fotsiny ihany fa hatrany amin'ireo firenena hafa.
Ny 8 Jona, ilay bilaogera Fabio Baccaglioni dia nizara [es] rohy iray [es] miaraka aminà sary nalainy tany Bariloche — samy ampiasàna ny Creative Commons license avokoa. Ny 16 Jona, i Daniel Barrios Laumenière dia nampakatra saripika maromaro tao amin'ny bilaogin'i Fabio [es]. Nanazava izy :
Lavenona nirotsaka. Sary avy amin'i Fabio Baccaglioni (CC BY-NC-SA 2.5)
Taorian'ny firotsahana lavenona voalohany avy amin'ilay volokano, dia somary tonitony ny andronay, ary taorian'izay dia oram-batravatra no niantraika tamin'ny fasika, namadika azy ho toy ny vongan-javatra mando madity. Tamin'ny herinandro lasa, nisy firotsahana lavenona manify in-telo izay nampanano-sarotra ny raharaha miohatra amin'iry fasika tery aloha satria tsy mba mety miraikitra ilay izy. Soa ihany, mba avy ny orana isaky ny roa na telo andro eo ho eo, manadio an'io lavenona io ary mamela ny olona mba ho afaka manadio ny lalana, n y tafon-tranony, fiara, sns..
Daniel, mipetraka ao Bariloche, dia nanaraka akaiky ilay fipoahana tao amin'ny bilaoginy Danbat [es], nandefa sary maro sy vaovao avaozina arakaraka ny zava-mitranga isan'andro hatramin'ny 4 Jona [es].
Ny vohikala Cadena3 [es] dia mampahafantatra momba ny fidirana an-tsehatry ny Sekreteran'ny Governemanta, Ariel Domingo, mikasika ny zava-misy ao Villa La Angostura:
“Sarotra be ny toe-draharaha raha raisintsika anaty kajikajy ireo lavenona matevina efa ho 30 sm. Nambara fa hoe hipoaka ilay volokano androany, noho izany, dia efa azo antoka ny hahitantsika lavenona sy orana bebe kokoa” hoy ny fanamafisan'ny Sekreteran'ny Governemanta, Ariel Rodriguez, tamin'ny Cadena3.
Fanampin'izany, nanamafy izy fa mbola haato aloha ny sekoly, saingy tsy nazavainy ny olana misy amin'ny resaka rano fisotro.
Manohy ny lahatsoratra:
Mbola misy ampahany betsaka amin'ny vahoaka no tsy manana herinaratra, ny orana sy lavenona nilatsaka tamin'ity Talata ity, izay nofaritana ho ny andro ratsy indrindra hatramin'ny niandohan'ny hamehana, dia nahatonga ny faritra sasany tsy hànana ireo filàna miantoka ny fahavelomana ho tombontsoan'ilay faritra ara-pizahantany.
Ao amin'ny Twitter, mampahafantatra ny @visitingarg :
Mitohy hatrany ny asa atao hanamaivanana ny fiantraikany any amin'ny faritra samihafa, mitohy hatrany ny fanadiovana. Ny #LaAngostura no tena voa mafy indrindra amin'ny rehetra.
Nahuel G. Abregú dia manamafy ny zava-mafy sedrain'i Villa La Angostura amin'ny alàlan'ity bitsika ity:
Vao avy nahazo vaovao aho avy amin'ireo olona mitondra sakafo ho any #LaAngostura ary, noho ny toetry ny làlana amin'izao fotoana, dia tsy afaka ny ho tonga any ry zareo, #Puyehue #Cenizas
Nisy ny tsaho niely mikasika ny mety hanafoanana ilay ‘Copa América‘ izay efa nandrasana fatratra hoe hanomboka ny 1 Jolay, satria maro ireo sidina no nofoanana. Na izany aza, ny Fikambanana ho an'ny Baolina Fandàka ao Azantina [es] dia nandiso izany tamin'ny famoahana filazàna an-gazety iray:
Ho valinteny tamin'ny fanontanian'ireo mpanao gazety mikasika ny fivoarana sy ny tetiandron'ny Copa America “Argentina 2011”, ny Komity mpikarakara dia nampahafantatra fa ity hetsika ity dia tsy maintsy hisy araka izay efa nandaminana azy, manomboka ny 1 ka hatramin'ny 24 Jolay 2011, miaraka amin'ny ora sy toerana efa nekena, mifanaraka amin'izay famaritana mialoha tamin'ny Desambra 2010.
Tsy antony mihitsy hanovàna izay efa nambàra mazava teo aloha ny fisian'ny loza voajanahary mitranga.
Sary avy amin'i Sebastián Criado (CC BY-NC-SA 2.0)
Ny Filoha Cristina Fernandez [es], dia nampahafantatra momba ny fanangànana vondrona iray hanara-maso ny kaontiny ao amin'ny Twitter @CFKArgentina. Nanambàra koa izy ny fanohanany an'ireo faritra voadona:
Amin'ny maha avy any The Patagonia ny tena, fantatrareo tsara fa ho eo mandrakariva aho, mandrakariva.
Te-hametraka fandriampahalemana izahay ary fitoniana ho an'ireny faritra rehetra ireny, miasa mafy izahay, ary manangona ny vaovao rehetra mikasika ny filàna amin'izao fotoana izao.
Nanangana vondrona iray izahay hanara-maso ireo faritra voakasik'ilay lavenona avy amin'ny Volokano Puyehue.
Tamin'ny 15 Jona lasa teo, ny Ministeran'ny Fambolena, ny Jono ary ny Sakafo [es] dia nanambàra ny fisian'ny hamehana tamin'ny alàlan'ny hitsivolana samihafa izay navoaka tao amin'ny Fifandraisana Ofisialy ho an'ireo faritra any La Patagonia, Arzantina.
Ireo Sary nalaina vao haingana dia miteny lavitra noho ny teny an'arivony.
Sary avy amin'i Daninofal (CC BY 2.0)